Bitcoin dia mihoatra ary mijanona eo ambonin'ny $ 5000 | Vaovao momba ny gadget
Nandritra izay volana lasa izay, ny cryptocurrency Bitcoin dia teo am-bavan'ny olona rehetra, izay tsy nisaorana velively, indrindra fa ny Wall Street, izay na dia nolavina aza dia tsy nahavita nanao azy ho vola vitsy an'isa, hatramin'ny fotoana rehetra ny isan'ny orinasa miloka aminy dia betsaka kokoa.
Tamin'ny niandohany, ity vola ity dia nampifandraisina tamina fiasan-doka tsy misy dikany, saingy taorian'ny fanidiana ny tsena tranonkala maizina lehibe nifandraisany, dia nitatra tamin'ny sehatra hafa ny fampiasana azy. Vokatr'io fahombiazana io, ny cryptocurrency faran'izay mahomby indrindra eto an-tany, Bitcoin, dia manana mihoatra ny $ 5.000.
Tao anatin'izay volana vitsivitsy izay dia hitantsika ny fomba nanombohan'ny firenena sasany mandrara ny ICO, hetsika iray natao hanapotehana ny fampiasana an'io vola io, zavatra iray mbola tsy nitranga na dia nisy fiantraikany teo iray volana mahery lasa izay aza, izay nanombohan'ny vola. hampihena ny sandany izay nahatratra $ 3.000. Saingy tato ho ato dia naka hazakazaka indray i Bitcoin ary nihoatra ny 5.000, mahatratra ny sanda farany ambony $ 5.652, tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity
Toy ny mahazatra dia tsy fantatsika izay mety ho antony lehibe nahatonga ny vidin'ity cryptocurrency ity, saingy mety mifandraika amin'ilay fork vaovao antsoina hoe SegWit2X. Ny fisehoan'ny Bitcoin Cash sy ny vola vaovao hafa antsoina hoe Bitcoin Gold, cryptocurrency vaovao fa tsy toy ny bitcoin dia azo trandrahana miaraka amin'ny GPUs, tahaka ny azontsika atao amin'ny Ethereum, dia ho tompon'andraikitra ihany koa.
Raisina an-tanana fa tsy voafehin'olon-kafa io vola io fa amin'ny asa atao isan'andro sy ny vaovao mifandraika amin'izany, tsy misy fomba hahafantarana raha hitombo hatrany ny sandany tamin'ity fomba ity ary raha toa ka nahatratra ny sandany farany ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Bitcoin dia mihoatra ary mijanona eo ambonin'ny $ 5000
Samsung CEO dia nanambara ny fametraham-pialana
Sivanina tanteraka ny fiasa amin'ny finday Razer